မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းကစားတဲ့ | Elite မိုဘိုင်း | £5အခမဲ့အပိုဆုရယူနိုင်သော |
နေအိမ် » မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းကစားတဲ့ | Elite မိုဘိုင်း | £5အခမဲ့အပိုဆုရယူနိုင်သော
အွန်လိုင်းကစားတဲ့အသေးအဖွဲအခွင့်အလမ်းတစ်ခု session တစ်ခုဖြစ်ပြီးဂိမ်းအခြေခံအားဖြင့်သော slot ကအပေါ်သို့အပေါ်မှီခိုဘောလုံးကိုအပေါ်နိုင်ပါဘူး. အွန်လိုင်းစပိုက်ဆံအဆစ်အတွက်ကစားအရှိဆုံးကျော်ကြားဂိမ်းများနှင့်ပြည်မှ-based လောင်းကစားရုံအကြားတစ်ဦးပိုပြီးခမ်းနားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပါသည်. ဒီဂိမ်းခံစားအကျော်ကြားဆုံးလောင်းကစားရုံကိုမှ Coronation ကာစီနိုသည်. အဆိုပါမှ Coronation ကာစီနိုသူတို့သည်အလွန်ဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူလိုအပ်သမျှဖောက်သည်ထောက်ခံမှုက၎င်း၏ကစားသမားကိုကမ်းလှမ်း, လုံလုံခြုံခြုံနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသော website ကို.
ပျော်စရာ Option ကိုအဘို့အလေ့အကျင့် slot နှင့် Play စနှင့်အတူစားပွဲတင်အားကစားပြိုင်ပွဲ, ရီးရဲလ်ငွေနှင့်အတူသိုက်နှင့် Play
အဆိုပါကစားသမားမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နံပါတ်သို့မဟုတ်ထူးဆန်းတူပေါင်းစပ်အပေါ်အာမခံထားရန်လိုအပ်ပါတယ်, ပင်သို့မဟုတ်အနီရောင်နှင့်မှောင်မိုက်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကံကောင်းအရေအတွက်. ဘောလုံးကိုသူတို့အာမခံသို့မဟုတ်ပတ်လည်အခြားလမ်းအနိုင်ရကစားသမား၏ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ကျရောက်သောဖြစ်ရပ်အတွက်. အွန်လိုင်းကာစီနိုလာနှင့်ပူးပေါင်းရန်အထောက်အပံ့အဖြစ်, အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံအများစု, ထိုအတူကစားသမားကမ်းလှမ်း မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းကစားတဲ့ ဆုလာဘ်. ဒီကစားတဲ့၏ဂိမ်းကစားဖူးဘူးသို့မဟုတ်မကြာသေးမီကအချို့သောအချိန်များအတွက်မကစားဘူးသောသူတို့ကစားသမားများအတွက်အမှန်တကယ်အသုံးဝင်သည်. အဆိုပါမိုဘိုင်းကစားတဲ့အနေနဲ့ကြီးမားတဲ့ထုံးစံ၌လုပ်နိုင်, ဘယ်လိုဂိမ်းအမှန်တကယ်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုမြင်ရဖို့ကစားသမားကူညီ. ကျနော်တို့အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံရက်နေ့တွင်မိုဘိုင်းကစားတဲ့မှဝင်ရောက်ခွင့်ရရန်ခြေလှမ်းဆနျးစစျအောက်တွင်.
ဟလို, ထိုအောက်တွင်ဇယားထဲကနေပိုက်ဆံ၏လောတဝင်ငွေမှဗြိတိန်၏ထိပ်တန်းငွေဂိမ်းမိုဘိုင်းဖုန်းကစားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းထဲက Check.
မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းကစားတဲ့ဖို့ Access ကိုရယူခြင်း
မှ Coronation ကာစီနိုကနေ Access ကိုရယူပါ
ပြဇာတ်အခမဲ့ကစားတဲ့မှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်း 24 သငျသညျအာမခံနိုင်ကြောင်းကိုသင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ site ကိုကောက်နေသည်×7 client ကိုအကျိုးအတွက်အကာအကွယ်ရနိုင်, ထိုအတောအတွင်းအတွက်လုံခြုံနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချ.
အကာစီနိုနှင့်အတူတစ်အပ်နှံ Store က Make
နောက်တစ်နေ့အဆင့်ကစားတဲ့ကစား tab ကို click နှိပ်ပြီးလုံးဝထူးခြားသောကြောင်း account တစ်ခုနှင့် password စေရန်ဖြစ်ပါသည်. ထိုနောက်မှအောက်ပါအဆင့်လောင်းကစားရုံနှင့်အတူတစ်သိုက်စတိုးဆိုင်အောင်သည်. အဆိုပါနိဒါန်းသိုက်ကိုကစားရန်အရေးကြီးပါသည် မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းကစားတဲ့ သင့်ဆုလာဘ်ဆုတ်ခွာဖို့လိုအပ်ကြောင်းချွတ်အခွင့်အလမ်းအပေါ်အဆုံးမှာ.
အဆိုပါကစားသမားကိုကစားရန်မည်သို့အပေါ်လမ်းညွှန်စာအုပ်ဖတ်နိုင် မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းကစားတဲ့ ကစားသမားဂိမ်းသစ်များပါလျှင်. ဒီဂိမ်းဟာအခြေခံမူအတော်လေးအခြေခံပညာများမှာ.
အ get မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းကစားတဲ့ ဆုလာဘ်!
ပူးပေါင်း & တိုင်းနယူးအဖွဲ့ဝင်များအတွက်အခမဲ့လှည့်ဖျားရယူနိုင်သော! ဆိုင်းအပ် & ညာဘက်အခုတော့ Play!